A na-ekwupụta OnePlus Nord CE 5G na Snapdragon 750G na ọnụahịa dị oke ọnụ | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Mobiles, OnePlus
OnePlus ekwuputala ihe bụ ntinye ọhụụ ya mgbe ọtụtụ asịrị gbasara njirimara ya, nke mere ka ọ bụrụ ebe ọ dịkarịa ala mma. OnePlus Nord CE 5G bụ ekwentị ọhụụ nwere nnukwu ikike n'agbanyeghị enweghị usoro nhazi kachasị ọhụrụ site na onye nrụpụta Qualcomm.
Nord CE 5G abanye n'ụzọ zuru ezu na akara Nord, bụ nke e mere maka ụdị ndị ọrụ niile, yana OnePlus Nord 5G dị ka akụkụ dị mkpa nke ezinụlọ. Na-asọpụrụ ụfọdụ ụkpụrụ, Nord CE batara iji nye njikọta maka ọgbọ na-esote na arụmọrụ na asọmpi asọmpi.
Want chọrọ ịma ihe ibu price na anyị nwetara maka gị na Nord CE 5G? Pịa pịa ebe a ma nweta smartphone a na ọnụahịa kachasị mma yana nkwa niile
1 Njirimara nke OnePlus Nord CE 5G ọhụrụ
2 CPU buru ibu, ọtụtụ RAM, nchekwa na batrị nwere ikike dị ukwuu
3 A ngụkọta nke anọ ese foto
4 Ọtụtụ njikọta na ụdị sọftụwia kachasị ọhụrụ
5 Ìhè na kọmpat
6 Nnweta na ọnụahịa
Njirimara nke OnePlus Nord CE 5G ọhụrụ
Ihe nlere a na-amalite site n’ihu n’ihu n’elu igwe 6,43 inch nke AMOLED nwere mkpebi HD zuru oke, na-enye gị ohere ile ọdịnaya dị elu. OnePlus Nord CE 5G na-ejikọ HDR10 + na ume ọhụrụ nke 90 Hz, ruru 20: 9 na a na ihuenyo nchebe megide ọkọ.
Nhazi nke OnePlus Nord CE 5G kpachara anya na zuru ezu, ihuenyo bi dum n'ihu na o siri ike ọ bụla bezel anya na akpa ilekiri, na ala naanị a obere elu bụ anya. Ọzọkwa, ekwentị ahụ na-abịa na igwefoto nwere oghere na aka ekpe aka ekpe.
CPU buru ibu, ọtụtụ RAM, nchekwa na batrị nwere ikike dị ukwuu
Ọ bịarutere kwadoro site na Snapdragon 750G, mgbawa ga-eme ka ọ dị iche iche ma rụọ ọrụ mgbe ejiri ya na ngwa, yana egwuregwu vidiyo. Ihe eserese ahụ bụ Adreno 619, dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga egwuregwu vidio kachasị ọhụrụ na ahịa, na mgbakwunye na ịme ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ.
OnePlus Nord CE 5G nwere ihe atọ nhọrọ nchekwa RAM, nke sitere na 6, 8 ruo 12 GB, dabere na nke ahọrọ, ọnụahịa ga-ebili na nhazi ka mma. Ekwesịrị ikwenye ọsọ ọsọ nke RAM, ọ na-egosi na ọ ga-abụ LPDDR5X, yabụ ọ ga-adị ngwa ngwa mgbe ị na-arụ ọrụ.
Otu ihe dị mkpa na ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ bụ ikike nchekwa, na OnePlus Nord CE 5G agbakwunyere nhọrọ abụọ. Nke mbụ n’ime ha bụ 128 GB, ebe nke abụọ bụ nke ezubere iji chekwaa ihe niile ụdị ozi, ọ bụrụ foto, akwụkwọ na ọbụlagodi egwuregwu, na 256 GB.
Batrị OnePlus Nord CE 5G bụ otu n'ime ihe ngosi, Ebe ọ bụ na ekele maka Warp Charge 30T Plus ọ ga-akwụ ụgwọ site na 0 ruo 70% na ọkara ọkara elekere na 30W. Ihe dị ka 4.500 mAh, zuru oke iji nye ndụ bara uru ụbọchị niile na-enweghị ịgafe ụgwọ na ojiji nkịtị. Nke a kwudoro na-abata n’ime igbe dị njikere ịga.
A ngụkọta nke anọ ese foto
Ngwaọrụ OnePlus ọhụrụ ahụ nwere ngụkọta nke sensọ atọ na azụ na otu n'ihu, na-edebe otu n'ime ha dị ka isi na-elekwasị anya. The n'azụ isi ihe mmetụta bụ a 64 megapixel mmetụta, otu n'ime ndị kasị ike na ahịa, nke abụọ bụ 8 megapixel super obosara n'akuku na nke atọ a 2 megapixel monochrome.
Dịka naanị ihe mmetụta dị n'ihu, a ga-ahụ oghere nke ejiri 16-megapixel lens mepụta, ọ na-enye gị ohere ịme foto dị mma n'ihu, selfies, ndekọ vidiyo na adabara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nzukọ vidiyo. Ihe igwefoto na ndekọ na HD zuru oke, yabụ ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ bulite ọdịnaya dị egwu na netwọkụ mmekọrịta yana ibe ndị ọzọ.
Ọtụtụ njikọta na ụdị sọftụwia kachasị ọhụrụ
El OnePlus Nord CE 5G batara nke ọma nke kachasị ọhụrụ, gụnyere njikọ ahụ ekele n'eziokwu na a ga-etinye ya n'ime ihe nhazi Snapdragon 750G. Ọ na-arụ ọrụ n'okpuru 5G SA / NSA netwọk, na mgbakwunye na-abịa na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS na nwere a headphone jaak. Kpọghe dị n'okpuru ihuenyo.
Ọ nwere ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ, nke iri na otu na OxygenOS oyi akwa ozugbo akpụkpọ ụkwụ ngwaọrụ, na-emelite dị ka ọ dị na mbụ site n'oge ruo n'oge. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - ekwe nkwa mmelite afọ abụọ, dịka ọ ga-adịkwa Otu OnePlus Nord 5G, nke n'agbanyeghị rutere na Android 10 emelitere n'oge na-adịbeghị anya gam akporo 11.
Ihe ọhụrụ OnePlus Nord CE 5G bụ ekwentị dị fechaa, emebere ka ị buru n’akpa gị n’agaghị ama ma e wezụga maka akụkụ ya. Ekwentị ahụ nwere ihe dịka gram 170, ebe nha bụ 159.2 x 73.5 7.9 mm, nke ọkpụrụkpụ nke ihe na-erughị milimita 8 bụ nke pere mpe.
OnePlus na-eme ihe doro anya nke na-enye ọhụụ ọhụụ na-ahụ na akara Nord 10 na Nord 100 maka ọha na eze na-anaghị achọ imefu ọtụtụ maka ekwentị. Nzọ dị n'ụdị ihe atụ a bụ iji nye onye ọrụ ahụ ikike na ịdị jụụAkụkụ ikpeazụ a bụ otu ebe akara ahụ si emesi ike.
NKWUKWU NKWUKWU CE 5G
IKIRU 6.43-anụ ọhịa AMOLED / Nwee ume: 90 Hz / HDR10 + / Full HD + (2.400 x 1.080 px) - Ọnụego 20: 9
Nchekwa n'ime 128 GB / 256 GB
Gbanwee CAMERA 64 MP Isi ihe mmetụta / 8 MP Super Wide Angle / 2 MP Monochrome Sensor
OS Gam akporo 11 ya na OxygenOS 11
UMUAKA 4.500 mAh na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na 30W
Njikọ 5G SA / NSA / WiFi 6 / Bluetooth / GPS / Isi okwu
NDỊ ọzọ Na ihuenyo akara mkpisiaka
Mbibi na ibu ibu 159.2 x 73.5 7.9 mm / 170 gram
El E gosiputala OnePlus Nord CE 5G, ga-ere na June 21, ịdị na AliExpress. Na mgbakwunye, enwere nkwalite nke ị na-echekwa ole na ole $ 20 na ego ego, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ihe dị ka euro 16 dị ihe dị ka.
Ọ dị na agba Charcoal Ink (nwa), Silver Ray (ọlaọcha) na Blue Void (acha anụnụ anụnụ) na ọnụahịa ha na-aga site na euro 299 maka ụdị 6/128 GB, nke 8/128 GB na-aga 329 euro na 12/256 GB nwere akara ọnụahịa nke euro 399 (ọ dị na ụda atọ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A na-ekwupụta OnePlus Nord CE 5G na Snapdragon 750G na ọnụahịa dị oke ọnụ